Ukwenza ukuqhuba ukuHamba ngokuShishini ngokuchanekileyo | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Ukwenza ukuqhuba ukuHamba ngokuShishini ngokuchanekileyo
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 31/03/2021)
Ukudana kunye nexesha lokumosha kwimigca yokungena kwisikhululo seenqwelomoya kunye nokuxinana kwezithuthi kwisikhululo seenqwelomoya konke zabahamba. Kungakhathaliseki nokuba uza kwi short uhambo Business ngololiwe okanye neyodwa ende eya kuthatha iiyure eziliqela okanye iintsuku, travel Train Business Kudla lula yaye ngokukhawuleza kunezinye iintlobo yokuhamba. kodwa speed kunye nendleko asingabo iingenelo kuphela yokuhamba kaloliwe. Bona zonke iingenelo ngezantsi.
Uphando lubonisa ukuba kakhulu ethandwa ishishini enxulumene indlela travel ngololiwe, nxamnye nohambo kunye imoto umvuzo. Qeqesha ukuhamba Ingaba i indlela fastest yothutho kuba ngaphezu kwesiqingatha ohambo (Kanye Ukungena komoya kunye namaxesha okufika yathathelwa ingqalelo) neendleko phantse sesihlanu inani endiza kunye nesinye kwisithathu yokuqhuba oya kuyo.
abahambi Business kunye nabathengi bokuhamba benkampani banayo ithuba lokunciphisa iindleko zokuhamba zongezwe namatikiti incwadi ngendlela eyenza i uhambo lula kangangoko kunokwenzeka ukuba umkhweli. zama amatikiti etreyini Online nokubhukisha nge SaveATrain nocwangciso kwangaphambili yeyona ndlela ifanelekileyo nezahlulo ezimangalisayo!
Khulisa ixesha lakho xa uhamba noShishino loQeqesho:
Xa u kuwe ukuhamba ngololiwe uya ukhetho babhukishe isihlalo itafile kwangaphambili leyo ethetha ukuba ungagcina ukusebenza ngexesha uhambela, yokwandisa ixesha lakho ngaphandle ofisi!
Khangela ezintsha zakho ulwazi uhambo intanethi okanye ukubhalisela izaziso SMS. Uya kwaziswa naziphi na ukulibaziseka okanye iingxaki en endleleni phambi kokuba ukuba station.
Train Business Travel okuphumla:
Ezinye izikhululo zikaloliwe zinika okuphumla iklasi ishishini apho abathengi ephambili bakhululeke ukufikelela wifi kunye nokusebenza izithuba. Ukufika for uhambo lwakho Kusembovu? Wasebenzise ezo izithuba ukuba kwenziwe umsebenzi ngexesha ulinde.
Train travel can offer many facility-based advantages for its zabahamba. Omnye umzekelo oku kuquka i-station kwaye on-ngololiwe Wi-Fi. Oku kwenza abakhweli ukuba ahlale nawo ngoxa move. Into nto leyo enganakho ukwenzeka xa uhamba ngemoto.
Schiphol ku Uqeqesha London
Enye yeendlela eziphambili ukuqalisa ilungelo lakho umdla ishishini train ngokuthenga amatikiti etreyini yakho intanethi usebenzisa Gcina-A-Train !
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-business-travel%2F%0A%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#businesstravel #Isikhululo sikaloliwe longtrainjourneys train Travel uhambo ngololiwe Travel traveltips